ဘာကြောင့် ကိုယ်ပိုင် Website တစ်ခုတည်ဆောက်ထားသင့်သလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေ ၃ပုံ-၂ပုံခန့်သည် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် သတင်းများးရှာဖွေရာတွင် Internet ကို အသုံးပြုခြင်း၊
Internet အသုံးပြုမှုများလာသည်နှင့်အမျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၊ ဖောက်သည်များက Online တွင် ရှာဖွေရန်အတွက် ကိုယ်ပိုင် Website ထားရှိရန်လိုအပ်ခြင်း၊
ကိုယ်ပိုင် Website တွင် စိတ်ကြိုက်အချက်အလက်၊ ဓါတ်ပုံများ၊ လုပ်ငန်းခိုင်မာမှုနှင့် လုပ်ငန်းသမိုင်းကြောင်း ရည်ရွယ်ချက်၊ အနာဂါတ် Plan များကို Website တွင် ပြသထားနိုင်ခြင်း၊
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မိမိလုပ်ငန်းများကို တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် Google Map, Phone, Mail, Message များ ဖြင့် ပေးပို့ ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊
မိမိရဲ့ Website တွင် မိမိလုပ်ငန်းအကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းဖြင့် Customer များအနေဖြင့် (၂၄)နာရီပတ်လုံး သင့်လုပ်ငန်း အကြောင်းကို ၀န်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင် Website တစ်ခု အမြန်တည်ဆောက်သင့်ပါသည်၊
ကိုယ်ပိုင် Website တစ်ခုတွင် ရှိသင့်သောအချက်များ….
ခေတ်မှီဆန်းသစ်သော Website တစ်ခု ဖြစ်ခြင်း။
မည့်သည့် Device အမျိုးအစားနှင့်မဆို အသုံးပြုရ လွယ်ကူသော Website ဖြစ်ခြင်း။
Website တွင် ဖော်ပြထားသော Data အချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်ခြင်း။
Customer များနှင့် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း။
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ ယုံကြည်အားကိုးမှုရှိခြင်း။ ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ အခက်အခဲတွေကို လက်တွေ့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာဖြစ်ခြင်း။
Myanmar Yellow Pages Digital Web Solution က အင်တာနက်မှ ၀င်ရောက်လာမည့် Visitiors တွေကို အမှန်တကယ်ဝယ်ယူသူတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာအကူအညီတွေ ပေးနိုင်ပါသည်။
မည်သည့် Device အမျိုးအစားနဲ့မဆို ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ Social Media တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း၊ Booking System ပါရှိခြင်း၊ Customer Relationship Management System (CRMS) စနစ်ကို အသုံးပြု ထားခြင်း စသည့် အချက်များ ကြာင့် Customer တွေရဲ့ ချိန်းဆိုမှုတွေကို တိကျစွာ ဖော်ပြပေးနိုင်သည့် အတွက် အချိန်မကုန် လူမပင်ပန်းဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ Customer အချက်အလက်တွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Website တွေအတွက် အသုံးပြုရေးဆွဲထားတဲ့ Software သည် Grade A အဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Microsoft Azure Cloud Server ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် Security လုံခြုံမှု အပြည့်အ၀ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အားသာချက်က Software Update ပါ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး upgrade လုပ်တိုင်း Feature အသစ်တွေကိုလည်း ထပ်တိုး အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့် Website က Date Out သွားမှာ စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့အပြင် Website ရဲ့ မူပိုင်ခွင့်ကိုလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံသော Website တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် Myanmar Yellow Pages Digital Web Solution က အချိန်ပြည့် ကူညီပေးနေပါသည်။
Myanmar Yellow Pages Digital Web Soution (IMEX (Myanmar) Co., Ltd.)
365-367, 2nd Floor, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Township, Yangon.
Tel : (95 1) 242758 , 377755 Mobile (95 9) 7323 5650
Email : myanmaryellowpages@gmail.com